Iindaba -Ukudityaniswa nemeko yangoku yamashishini, kufuneka siyenze inyathelo ngenyathelo kwaye ngokusebenzayo
Idityaniswe nemeko yangoku yamashishini, kufuneka siyenze inyathelo ngenyathelo kwaye ngokusebenzayo
Nge-16 ka-Epreli, iimpahla zikaPinyang zafumana iodolo yamaqhekeza angama-3000, awathunyelwa ngempumelelo ngomhla wama-29. Ubungakanani beli bhetshi yee-odolo buncinci kakhulu, kwaye kufuneka imibala esixhenxe. Kuthatha iiyure ezili-12 ngombala omnye ukudaya kunye neentsuku ezintathu zemibala esixhenxe. Ikwafuna ukugqiba iinkqubo ezahlukeneyo njengokuluka kunye nokuprinta. Okokugqibela, inokuhanjiswa ngeentsuku ezili-13, ebonisa ubhetyebhetye kunye nokuqina kwemveliso yeshishini.
“Ngaphandle kotshintsho lweshishini kunye nokucinga nge-Intanethi, ezi zinto azinakwenziwa. Ukucinga nge-Intanethi kufuna ukusebenzisana ukuze kuphunyezwe umxholo weentsuku ezisi-7 zokuhanjiswa kwenkqubo nganye. Iifolokhwe ezincinci ezivaliweyo zenza iifolokhwe ezinkulu ezivaliweyo, ezidityaniswe kwimveliso eguqukayo. Ukuveliswa kwe-Flexible, njengesiqwenga somgubo, kunokuxovwa akukhathalekile nokuba mkhulu kangakanani iodolo.
Ukuba bhetyebhetye akubonakalisi kuphela kumxholo wenkqubo yenguqulelo yokuvelisa, kodwa nakwingqondo yolawulo lwamashishini. I-70% yomsebenzi kumashishini engubo kufuneka yenziwe, kwaye abasebenzi kufuneka bazimisele ukwenza iiodolo ezinkulu. Ke ngoko, imveliso eguqukayo inemfuno ephezulu kakhulu kulawulo kwaye kufuneka ilungiswe inyathelo ngenyathelo ngexesha elifutshane. Ukuveliswa kwempahla kuselishishini elifuna abasebenzi abaninzi. Umzekelo, izixhobo ukondla oluzenzekelayo kumasiko bokudaya kuphucula inkqubo ngqo kunye nomgangatho imveliso. Nangona kunjalo, kwezinye amakhonkco emveliso, akunakwenzeka ukuba kupheliswe ngokupheleleyo abasebenzi. Ayinakuphepheka kwaye iyimfuneko kwi-Intanethi yemizi-mveliso ukuphuhlisa ukuza kuthi ga ngoku. Nangona kunjalo, ngenxa yamashishini ahlukeneyo kunye namanqanaba ahlukeneyo okungena, kubalulekile ukudibanisa imeko yangoku yamashishini ukuyenza inyathelo ngenyathelo nangokusebenzayo.